Iindaba-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Indlela yokucoca Intloko yeshawari? Iingcebiso zokuLondoloza kwiMilomo yeshawa?
Amakhaya aqhelekileyo aya kufaka iishawari, kodwa iintlobo zeeshawa ziya kuba zihluke, kwaye izitayela ezahlukeneyo kunye neempawu ziya kuba zihluke, ngoko kufuneka siqonde ezinye malunga neeshawa, kwaye iishawa ziya kusetyenziswa ixesha elide. Ukuba kukho ingxaki yokuvala, indlela yokucoca umlomo w......
Indlela yokufaka iNtloko yeshawari
Okokuqala, cima umthombo wamanzi, ubeke i-rubber pad kwicandelo lombhobho, uqinise umbhobho ekudibaneni kombhobho wamanzi, uze udibanise intloko yeshawa kumbhobho. Emva kofakelo, zama ukuvula iswitshi yentloko yeshawa. Ukuba akukho ngxaki, vele Ilungele ukusetyenziswa.
Uyicinezela njani Intloko yeshawari
Intloko yeshawa inomphumo omncinci wamanzi, kunye nepompo ye-booster okanye intloko yokuhlamba enomsebenzi we-booster inokufakwa kuyo. Ukongeza, ukuba i-valve yokungena kwamanzi ivulwe incinci kakhulu, intloko yeshawari inemveliso encinci yamanzi. Ngeli xesha, i-valve yokungena kwamanzi kufuneka ivu......
Yeyiphi imathiriyeli eyona hose yeshawari ingcono?
Ukongeza kwintloko yokuhlamba kakuhle kwindawo yokuhlambela, i-hose edibeneyo nayo iyinxalenye ebalulekileyo.
Izizathu zomonakalo kwi-hose yeshawa kunye neendlela zokulungisa
Izizathu ezinokwenzeka: ukufakela okungafanelekanga, ukuguqulwa kweringi yerabha, ukungalingani okanye ukudityaniswa kombhobho obhityileyo kakhulu, kunye nokungahambelani phakathi kombhobho kunye neshawari.
Indlela yokukhetha ikholomu yokuhlamba?
Unokuchukumisa ikholomu yeshawa ukuze uzive izinto ezingaphezulu kunye nokuziva.